Lisi-pifidianana : Tsy hosokafana -
AccueilRaharaham-pirenenaLisi-pifidianana : Tsy hosokafana
Taorian’ny fangatahana napetraky ny CENI teny anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany, dia nampidirina anatin’ ny lisi-pifidianana ireo anarana latsaka noho ny olana teknika. Aorian’izay rehetra izay kosa dia hiroso avy hatrany amin’ ny fanotana ny lisitra sy ny kara-pifidianana ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana.
Ny lisi-pifidianana nofaranana tamin’ny faha-15 ny volana Mey ihany no ampiasaina amin’ ny fifidianana ho avy hoy ny CENI na ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, noho ny fahateren’ny fotoana. Taorian’ ny fitarainana nataon’ ireo efa mpifidy teo aloha, dia nilaza fa tsy tafiditra anatin’ny lisi-pifidianana izy ireo. Dia niroso tamin’ny fanamarinana ny CENI, ka fantatra fa an’arivony ireo latsaka tsy tafiditra anatin’ny lisitra. “Nametraka fangatahana teny anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany anivon’ny distrika maromaro izahay, taorian’ny fahitana fa nisy tamin’ireo mpifidy nilatsaka no tsy tafiditra anatin’ny lisi-pifidianana. Ireo olona ireo dia efa nisoratra anarana teny anivon’ ny fokontany, saingy tsy voarakitra anatin’ny lisi-pifidianana ny anarany. Toraka izany ihany koa ireo olona izay efa nifidy ny taona 2013, saingy tsy tafiditra anaty lisitra. Noho io fahefana izay nomena voalazan’ny andininy faha-42 anatin’ ny didy hitsivolana mikasika ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka, dia ho tafiditra anaty lisitra ireo olona ireo ”hoy Thierry Rakotonarivo filoha lefitry ny CENI.
Noho izany dia nanamarika ny filoha lefitry ny CENI, fa taorian’ ny fampidirana ny anaran’ireo olona ireo anaty ny lisi-pifidianana, dia hiroso amin’ ny fanotana ny lisi-pifidianana izy ireo. Miara-dalana amin’izany ny fijerena ny anarana miverina indroa. Mahatratra 250 000 ireo anarana miverina indroa hita anatin’ny lisi-pifidianana, ankoatra izay dia mbola hisy ihany koa ny fitsinjarana ny mpifidy amin’ ireo biraom-pifidianana. Aorian’ izay dia ho fantatra ny isa mazavan’ireo izay handray anjara amin’ny fifidianana ny faha-7 ny volana novambra 2018. Nomarihin’ny filoha lefitry ny CENI fa tsy fampidirana anarana vaovao no natao, fa kosa fampidirana ireo latsaka tamin’ny fanisana ny mpifidy farany teo. Hatreto dia efa miroso tsikelikely amin’ny fanotana ny kara-pifidianana ny CENI, ary hahazo izany ihany koa ireo anarana latsaka tamin’ny fampidirana anatin’ny lisi-pifidianana.